Yakatumirwa ne Tranquillus | Apr 25, 2018 | Kuvandudza wega
Pasinei nehupenyu hwako hwehutano kana huri hwega, iwe unowanzofanira kusarudza.
Kunyange zvazvo vamwe vachikosha kupfuura vamwe, kuziva kuti kuita sarudzo yakarurama hakugoni kujekeswa.
Kana zvasvika pakuita zvisarudzo, nzira mbiri dzinopesana, iyo yezvikamu zviviri zvinobatsira uye zvisingabatsiri uye imwe inosanganisira kutevera mafungiro evanhu.
Kuti ikubatsire kuita zvisarudzo zvakanaka, heano maitiro maviri uye mamwe mazano.
Method # 1: Kubatsira uye kusagadzikana mapoka
Iyi ndiyo nzira iyo vanhu vakawanda vanoshandisa kuita sarudzo. Inogona kubudirira nokuti inokubvumira kunyatsojekesa zvaunokunda uye iwe unorasikirwa kuita sarudzo iyoyo. Mashoko akaiswa, inzira yekupa chinangwa pakugadzirisa chisarudzo.
Zvisinei, iyi nzira inoda nguva uye kuratidzwa kwechokwadi pane sarudzo.
Inogona kushanda nguva dzose, kungokuvhiringidza iwe mberi.
Method # 2: Vimba neInstinct
Inowanzotaurwa kuti sarudzo yekutanga yaunofunga inowanzova yakarurama.
Uye chii chakaita kuti tiite chisarudzo ichocho kungongova maitiro edu. Iko maonero akasiyana zvachose ekugadzira chisarudzo.
Heano muenzaniso: iwe unofanirwa kuenda kunongedza A, iwe unosarudza nzira, kazhinji usina kunyatsofunga nezvazvo.
Munhu anovimba nemasikirwo ake haazombomubvunzo chisarudzo chake.
Kunyangwe kana njodzi yakaitika parwendo urwu, iye achakuudza kuti izvi zvichaitika.
Kuvimba nemanzwiro evanhu ndeyekuvimbawo pachako uye kuzvitaurira kuti zvisarudzo zvinogadzirwa zvakanaka uye zvakanaka kwatiri.
Zvidzidzo zvinoratidza kuti zvisarudzo zvakanaka zvinowanzova zvakanakisisa, kunyanya apo dzakabatana kune nzvimbo inodzorwa kana mumamiriro ezvinhu ane ngozi.
VERENGA Sei uchifanira kubuda muhukuru?
Mazano angu ekuita zvisarudzo zvakanaka:
Zano # 1: zivai kuti munoteerera sei
Manzwiro ako anogona kukubatsira iwe kuita zvisarudzo zvakanaka. Zvechokwadi, manzwiro anoita sendima iyo inokupa iwe ruzivo runokosha pamusoro pemamiriro acho ezvinhu.
Icho chiratidzo chinonyatsonaka, iwe unofara uye unofara kana pane zvinopesana kusuruvara uye nostalgic, kuziva kuti unoteerera sei manzwiro ako.
Zano # 2: Chengeta chete ruzivo rwaunoda
Kutungamirirwa nemafashamo emashoko, haugone kuita zvisarudzo zvakanaka.
Zvichava zvakaoma kusiyanisa izvo zvinokosha uye zvisingaiti.
Saka ramba uchifunga nezvezvinhu zvinonyanya kukosha uye funga nezvezvinokosha.
Zano # 3: kuziva kuti ungamisa sei
Kuramba kwakanyungudzwa pane chisarudzo chokutora kwamaawa hakuna maturo.
Saka, rega kufunga uye wobuda.
Izvi zvichakubatsira kuona zvakajeka, iwe uchanonoka, zviri pachena panguva iyo chisarudzo chakanaka chichaonekwa.
Ziva nzira yekuita zvisarudzo zvakanaka August 23rd, 2018Tranquillus
pashureUngaita sei kuti utera hwako huve nesimba?
zvinoteveraNzira yekugadzirisa zvinangwa zvinokwanisa sei?